कैलाशको कुटी: तिमी साह्रै नजाती
म अहिले जहाँ बसीरहेछु। जहाँ हिडिरहेछु। जहाँ काम गरिरहेछु। ती सबै ठाउँमा एकखालको उत्सव चलिरहेछ- प्रेमको उत्सव। यस्तो उत्सबमा तिमी मसँगै छौ भावनामा। कल्पनामा। हरेक क्षण। हरेक घडी। त्यसैले म खुशी छु। तर यो मनले तिमीलाई आलिङगनभित्रै भेट्न खोज्छ। आँखाको सामुन्ने राखेर भरपूर माया प्रेमको वर्षातले प्रफुल्लित पार्न खोज्छ। म के गरु सिम्मा? तिमी नै भन न म के गरु? के यो मेरो इच्छा नराम्रो हो र? त्यही माथि यो प्रेमको उत्सबले मायाको भोक बढाइरहेछ मभित्र। म त साह्रै उद्देलित भइरहेछु यसबखत। यहाँको माहौल अनि वातावरणमा तिमीलाई सम्झेर छट्पटीदैछु। म तिमीबाट टाढा छु भनुँ भने म आफैलाई भित्रैदेखि पीडा हुन्छ। म तिमीसँगै छु भनुँ भने यो मनको प्यास बढेको बढेकै छ। सायद तिमीलाई पनि त्यस्तै हुन्छ पक्कै पनि। तिम्रो तिर्सना यो मन अनि मस्तिष्कमा चुलिएको चुलिएकै छ। पलपल। हरपल।
म यहाँ परदेशमा भएपनि म आफैभित्र छैन। आफैसँग छैन। यो ठाउँमा छैन। किनकी म तिमीसँग छु। तिमीभित्रै छु। अनि तिमी पनि आफूमा छैनौ। किनकी मसँग छ्यौ। मभित्र छ्यौ। वास्तवमा हामी एकअर्काभित्र साटिएका छौ। गाँसिएका छौ। भन्नेहरु भन्छन् जुनी जुनीसम्म। तिमी के भन्छ्यौ कुन्नी। तर मैले नदेखेको त्यो अर्को जुनीको म ठेक्का लिदिन। यो जुनीभरिलाई हामी एकअर्कामा समाहित भइसकेका छौ। त्यसैले अहिले मेरो हालत के होला? तिमी आफै सोच्न सक्छ्यौ। र बारम्बार त्यही त सोच्ने गर्छ्यौ तिमी। अनि तिम्रो हालत के होला? मनमनै मायाको असीमित भाव बोक्दै म पनि त्यही सोच्छु। तिम्रै बारेमा सोच्नु, मेरो अंग अंगमा तिम्रै स्पर्श अनुभूत गर्नु, तिम्रै कल्पनामा डुब्नु, हाम्रो हरेक पलको महशुश गर्नु नै मेरो जीवन बनेको छ सिम्मा। तिमी नजाती मान्छे।
ए साँची सिम्मा तिमीलाई अचम्म लाग्ला मेरो कुरा सुनेर कि प्रेमको पनि उत्सब हुँदो रहेछ भनेर। हुँदोरहेछ हैन सिम्मा यहाँ त भइरहेछ। अब तिमी सोध्छ्यौ होला के का लागि यो उत्सब? यहाँ त सबैको लागि यो निकै ठूलो उत्सब रहेछ। तर केका लागि हो कुन्नी मैले पनि चुरो कुरो बुझ्न सकेकै छुईन। हेर न त्यत्रो बुझ्ने मेरो ध्यान कहाँ र? तिमीले नै मेरो ध्यान कही पठाउँदैनौ। तिमीमै केन्द्रित गरिरहन्छ्यौ जतिबेला पनि। अनि? हत्तेरी। तिमी मेरो अघि भइदिएको भए कर्के नजरको वाण हानेर मलाई घाइते पारिसक्थ्यौ नि सिम्मा? किनकी तिमी त नजाती मान्छे। हुन त म सद्दे नै कहाँ छु र अहिले पनि। त्यसैले त म यस्तरी मनको कुरा ओकल्दैछु के केको बहानामा।
सुन न सिम्मा, यहाँ हप्तादिन अघिदेखि हरेक चोक, गल्ली अनि बजारमा आफ्ना मायालुलाई दिने उपहार किन्नेहरुको ओइरो लाग्यो। मलाई पनि तिम्रो लागि विशेष कोशेली किन्ने ठुलो धोको लाग्यो। र म पनि भौतारिए केही दिन। मेरो दुर्भाग्य सिम्मा। हाम्रो मायाको भाव बोकेको, तिमीलाई दिउँ दिउँ लाग्ने त्यस्तो चीजै भेटिन। सबैले रोजीछानी अनेकथरीको ठूला-साना, झिल्केमिल्के, ठिकैको-निकैको बस्तुहरु किनेर झिलीमिली कागजले पोका पार्दै थिए। मोलमोलाई गर्दै थिए। बगलीतिर, झोलातिर थन्क्याउँदै बाटो लाग्दैथिए। खै के भाको हो कुन्नी मैले त ती बस्तुहरुले हाम्रो भावनाको एउटा सानो छेस्कापनि छोएको देखिन। त्यसैले म खाली हात छु। अनि तिमी पनि। मेरो नजरै दोषी हो कि? तैपनि तिमीलाई चित्त बुझ्दो उपहार किन्न र दिन मलाई हुट्हुटी लागिरहन्छ सिम्मा। के उपहार दिउँ तिमीलाई सिम्मा? तिमी आफै मलाई एकपल्ट, मात्र एकपल्ट संकेत गरेर मलाई सघाउ। तिमी मलाई सघाउँदैनौ भन्ने थाहा छ। त्यसैले तिमी नजाती भनेको मैले।
तिमीले अहिलेसम्म पहिलो र अन्तिमपल्ट मलाई भनेकी थ्यौ नि 'मेरो लागि अरु केही चाहिदैन सियो-धागो ल्याइदिनुस्'। तिम्रो लागि त्यही सियो धागो निकै महत्वको थियो। हो सिम्मा, तिमीले आफ्नो र मेरो फाटेको, उध्रेको, च्यातेको सबै लुगाफाटा कौशलतापूर्वक जाती पार्थ्यौ। व्यवहारहरु टार्थ्यौ। अनि म र मेरो दुखेको मनलाई, अवस्थालाई राम्ररी सँगाल्थ्यौ। निको पार्थ्यौ। सियो धागोले लुगाफाटा टालेसरह। तिमी भन्थ्यौ 'दुबैको जोडा नमिलुञ्जेलसम्म अ-आफ्नै धूनमा, अ-आफ्नै संसारमा चकमन्न। मिलेपछि नौलो सृजना बन्छ। तपाई र म 'हामी' भएजस्तै सियो धागोले तेस्रो अथवा दुबै मिलेर नयाँ कुराको मिश्रणसहितको सृजना गर्छ। त्यसैले सुन्दर उपहार त्यही हुनेछ मेरोलागि'। हुन त त्यसबेला मेरो ल्याकत पनि थिएन अरु किन्ने। भएपनि तिमीलाई माग्ने छुट मात्रै अधिकार छ। तैपनि तिमी केही भन्दिनौ। के विधि नजाती छ्यौ तिमी त सिम्मा।
एकपल्ट मैले सोधेथे तिमीलाई- 'माया र प्रेमको भण्डार तिमी हौ कि माया र प्रेमको भण्डारभित्र हामी छौ'। चन्द्रमाजस्तो मुहारलाई अझ उज्यालो पार्दै तिमी भन्थ्यौ- 'दुबै सही हो नि। माया र प्रेमको भण्डार मभित्र छ। त्यो तपाईकै देन हो। अनि तपाईभित्र पनि त्यही भण्डार छ। हामी दुबैले सृजना गरेको भण्डारभित्रै हामी छौ'। माया गर्न मात्र हो र? मायाप्रेमको कुरा फर्सेल्न पनि कत्ति जानेकी सिम्मा तिमीले। तिमीले बनाउँछौ नि विशेष मंसीरे जाँड। जत्ति धेरै समय राख्यो त्यत्ति कडा, त्यत्ति नै लाग्ने, गन्धैले दिमागमा पाइन चढ्ने र जति खायो उत्ति नै खाउँ खाउँ लाग्ने खालको क्या त सिम्मा। हो त्यस्तै गरी तिम्रा ती हरेक कुरा र वाक्यले झन् झन् तल्‌तल् जगाउँछ तिम्रो। मलाई तल्‌तल् जगाउँदा त तिमी झनै नजाती।
यहाँका मान्छेहरु प्रेम दिवस मनाइरहेछन् आज, यतिखेर। तर सबैले मलाई एक्लो देख्छन्। के था उनीहरुलाई म हरेक पल प्रेमकै आडमा बाँचीरहेको छु। प्रेमकै सागरमा डुबीरहेछु। हर घडी प्रेम दिवस मनाईरहेछु। म मात्रै किन नि हामी दुबै मनाईरहेछौ धुमधामसँग। अरुले देख्दा तिमी कुनै काममा फसेकी होलिउ। म पनि कुनै काममा फसेको छु। तैपनि तिमी मेरो लागि फसेको ठाउँबाट निस्केरै म कहाँ आइ नै हाल्छ्यौ। हामी आजैको दिन मात्रै हैनौ सँधै नै यसरी प्रेम दिवस मनाईरहेका हुन्छौ। त्यसैले त म गद्‌गद् छु। यहाँका ती मान्छेहरुको प्रेम र माया सबैले देख्छन्। या देखाउँछन् कुन्नी? बाहिरी आँखाले नदेखी नहुने प्रेमको अगाडि म एकलकाँटे देखिएको हुनसक्छु सिम्मा। जसरी म प्रेम दिवस मनाउँने धेरैजसोले प्रेमबिनाको दिवस मनाएको देख्छु त्यसैगरी उनीहरुले मलाई पनि निरश देख्दाहुन् नि। यहाँ त तिमी मेरो लागि मात्रै हैनौ उनीहरुको लागि पनि नजाती भयौ नि।
तर वास्तवमा हामी मायाप्रेमको सुन्दर संसारमा हुन्छौ सँधै नै। जहाँ हामी ज्यादै खुशी छौ। एकअर्काको अँगालोमा छौ। एकअर्कामा हराएर आनन्दको केन्द्रविन्दुमा छौ। हामी उत्कृष्ट छौ। किनकी तिमी मसँग छ्यौ। त्यसैले यो हाम्रो मायाप्रेमप्रतिको अटुट विश्वास हो। तिमी र तिम्रो समर्पणप्रतिको भरोसा हो। अनि मैले पाएको मायाप्रतिको आभार पनि। त्यसबाहेक मैले तिमीलाई दिने कोशेली केही भेटिन। यो तन-मन पहिल्यैदेखि तिमीसँगै छ। मेरो सबै कुरा तिमीमै छ। अब भन सिम्मा म तिमीलाई के कोशेली दिउँ? तिम्रो हृदयको आवाजले भन्दैछ मलाई-'तपाई र तपाईको यस्तै माया नै स्वर्ग छ'। मेरो मायाप्रेम, आदर, सद्भाव, जेजति मसँग छ सबै तिमीलाई भइसकेको छ। त्यही कुरालाई तिमी सम्पूर्णताको उपमा दिन्छ्यौ मेरो लागि त्यही कोशेली भो। अनि तिमीले मानेको सम्पूर्णतालाई म कहिल्यै घट्न दिन्न। यही नै मेरो कोशेली भयो है सिम्मा। आखिर प्रेम नै जीवन हो। अनि मेरो प्रेम तिमी हौ। अनि सारा प्रेम नै मसँग भएपछि दिवसको के कुरा। सारा आकाश नै मसँग छ। मभित्र छ। जूनको के कुरा।
देख्यौ त सिम्मा। तिमीलाई सम्झेर म बहकिएछु। कहिले तिमीसँगै भएको कुरा गर्छु। तिमीभित्रै भएको पनि ठोकुवा गर्छु। कहिले तिमीलाई दिने कोशेली खोज्छु। तर पनि मेरो मनको एकछेउ पनि भरिन्न। हेर तिमीले मलाई के बनायौ। त्यसैले अझै बहकिन्छु। सुन सिम्मा, यहाँका हूलभन्दा बेग्लै छु म। यहाँका मान्छेहरु साह्रै जाती। भएभरको चीजबीजसँग रमाइरहेछन् आफ्नो अगाडि बसेका मान्छेहरुभन्दा पनि। चीजबीजसँग प्रेम गरिरहेछन् मान्छेसँग भन्दापनि। निर्जीव बस्तुमा के बिधि प्रेम देख्छन्? यहाँका प्रेमीहरु मजस्ता रहेनछन् सिम्मा। अनि तिमीजस्ता पनि पटक्कै छैनन्। त्यसैले म नितान्त एक्लै भए। त्यसैले म अझ बहकिए। सिर्फ तिम्रै कारणले त हो नि सिम्मा। तिमी किन मलाई यत्तिका सताउँछौ हँ? पख तिमीलाई। तिमी साह्रै नजाती छ्यौ सिम्मा। सारै नै। तर तिमी यस्तै नजाती भइरहनु है। सँधै नै। यस्तै यस्तै तिम्रो नजाती कुराहरुले मलाई अकल्पनीय शक्ति मिल्छ। त्यो तिमीलाई थाहै हुँदैन। तिमीलाई म सँधै तिमीबाटै चोरीरहन्छु। त्यो पनि तिमीलाई थाहै हुँदैन। अनि तिमी पनि थाहै नदिइकन मलाई मदेखि नै चोरेर आफैसँग लगिरहन्छौ। अनि त झन् तिमी मेरो 'नजाती मान्छे'। किनकी जे छ, तिम्रो नजातीपनभित्रै त छ।
तिमीले परदेश ठानेको यो ठाउँ, जहाँ बसेर म अक्षरको ढिका खोर्सिदैछु। तिम्रो यादमा उनेका यी शब्दहरु आजलाई यति नै है।
फागुन ३, २०६५
Posted by कैलाश at 2:02 PM
Happy valentine day to ….nice article …
कति मिठासका कुरा, हुन त माया को कुरा अनि प्रेम को कुरा कस्लाई पो रसीलो लाग्दैन र ? साची नै म त दंग भएर पढ़े नि कैलाश जी ....म त कता कता हराई सकेछु थाह नै भएन.... सकिएको नै पतै पाइन । ।
धेरै धेरै साधुबाद !
Dherai ramro abm shabdahruko raamro chayan, khusi laagyo, pardeshiko Dairy ko paanaaharu paltidaa.
" सारा प्रेम नै मसँग भएपछि दिवसको के कुरा.. " वास्तवमा यसरी प्रेममा अलिकति नउठी नहुने हो अब तर सँधै प्रेमीहरु प्रेममा डुब्नै चाहन्छन , किन हो किन ?
आफु त मोरो सोझो लप्पन छप्पन नजानिने है पहिलो पटक यो दिनको उपहार पाएको तर एस्को अर्थ लाउन नसकेर आपत तर के गर्नु आज ५ बर्ष भईसक्यो यो डे मनाउन नपाएको, उन्ले त अरु कसै सँग मनाउन्छन रे युरोप तिर छिरेको कुनै धनादय सँग। आफु त परदेश त्यो पनि गरीबहरुको रोजगारीको ठाउ गल्फमा। न त जाती नै भयो न त नजातिनै।
derai ramro cha shabdako chanawat yo dairy le nirantar pawos.yasari nai.arko aank kahile?